Praiminisitra Ravelonarivo Jean : “Ho foana tanteraka ny delestazy…” | NewsMada
Praiminisitra Ravelonarivo Jean : “Ho foana tanteraka ny delestazy…”
Noraisin’ny Praiminisitra Ravelonarivo teny Mahazoarivo, omaly, ny filoha tale jeneralin’ny Vondrona orinasa Dangote. Nivoitra ny ho fiaraha-miasa indrindra eo amin’ny sehatry ny fanampiana antsika momba ny herinaratra.
“Hamaha ny olan’ny delestazy ny orinasa senegaley Dangote. Tsy hifaninana fa hiara-kiasa amin’ny Jirama izy ireo. Ho foana tanteraka io olana io raha tanteraka ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta”, hoy ny Praiminisitra Ravelonarivo Jean, nanoloana ny mpanao gazety.
Tsy hiandry ela rahateo fa hofaritana ato anatin’ny roa volana ny ho endriky ny fiaraha-miasa eo amintsika sy ity orinasa anisan’ny lehibe sy goavana aty Afrika ity. “Anisan’ny tanjakay ny momba ny resaka jiro sy rano. Eo koa ny fambolena sy ny siramamy…. Miankina amin’ny governemanta malagasy ny fametrahana sy famaritana ny laharam-pahamehana amin’ny tokony hiarahana miasa”, hoy ny tale jeneralin’ny orinasa Dangote, Serigne Mbacké, namintina ny fihaonany amin’ny Praiminisitra Ravelonarivo. Hanomboka afaka telovolana ny asa hataon’izy ireo eto.
Notsiahiviny fa miasa manerana an’i Afrika ny orinasan’izy ireo. Misokatra ho fanampiana ny vahoaka malagasy, araka ny nambarany ihany. Mbola ho avy hanasonia ny fifanarahana fiaraha-miasa sy fiaraha-miombona antoka eo amin’ny roa tonta ny filoha tale jeneraly, Aliko Dangote.
Tsiahivina fa misehatra eo amin’ny tontolon’ny indostria toy ny simenitra, ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany sy ny solika ny Vondrona orinasa Dangote.
Tsy mijanona eo ihany anefa fa eo koa ny ady ataon’izy ireo amin’ny tsy fanjarian-tsakafo aty Afrika.